Vaovao - tavoahangy fampisehoana hafanana
Tavoahangy vy tsy misy fangarony
Tavoahangy fanatanjahantena PE
Tavoahangy fitaratra sy silika
Stainless vy Tumbler
Tumbler fitaratra sy silika
Tavoahangy fampisehoana hafanana
Mba hamahana ny olan'ny rano fisotro amin'ny ririnina, ny safidy voalohany amin'ny fararano sy ririnina - tavoahangy thermos
Tamin'ny faran'ny volana septambra dia nivadika ho mangatsiaka avy hatrany ny andro, ary hisy hatsiaka kely isa-maraina sy hariva. Raha ny tena izy, ankoatry ny fanaovana akanjo bebe kokoa, ny fitandremana ny hafanana dia afaka mamaha olana lehibe iray. Amin'ity vanim-potoana ity dia afaka misafidy rano mafana mafana isika fa tsy rano mangatsiaka mangatsiaka, indrindra amin'ny fararano rehefa mafana sy mangatsiaka. Ary misy tavoahangy thermos tsy tambo isaina eny an-tsena. Azo lazaina fa karazany daholo izy ireo. Ka misy tavoahangy thermos ve izay manambatra ny insulation maharitra sy ny fivezivezena maharitra?
Ity tavoahangy fantsom-by ity dia mahafeno ny zavatra ilaiko rehetra amin'ny takelaka misy banga. Raha ny fitoviana loko dia misy loko maro azo isafidianana ary azo amboarina. Ny loko madio dia afaka mampitombo ny fanekena sy misoroka ny lesoka ihany koa. Mandritra izany fotoana izany dia manatsara ny kalitaon'ny tavoahangy ny haitao vita amin'ny perla eo amboniny, na dia tsy ampiasaina aza izy io, dia ho tsara tarehy eo ambony latabatra.
Ny habeny dia mety ihany koa, miaraka amin'ny haavon'ny 235mm sy ny savaivony 65mm, tsy misy olana ny mitondra azy isan'andro. Ny lanjany dia fehezina amin'ny 180g eo ho eo, izay tsy dia mitovy amin'ny lanjan'ny finday ampiasainay matetika. Miaraka amin'ny fahafaha-manao safidy 300 ~ 500ml, tsy misy intsony, tsy latsa-danja izany, ny famokarana kafe indray mandeha dia afaka mahafeno ny fisotroan'ny ankamaroan'ny olona.
Raha ny marina, ny fitsipiky ny tavoahangy thermos dia mitovy amin'ny iray, izay manatsara ny vokatra insulation amin'ny fampitomboana ny fahaterahana. Mazava ho azy, ity tavoahangy thermos ity dia tsy misy ankanavaka, fa azo lazaina ho ny farany amin'ny insulation. Ity tavoahangy thermos ity koa dia manana asan'ny fanoloana bateria vaovao, izay afaka manara-maso sy mifehy ny mari-pana ao anaty tavoahangy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, ary hahatratra ny faratampony amin'ny insulation.